Shirkii IGAD oo Muqdisho ka furmay – STAR FM SOMALIA
Shirkii IGAD oo Muqdisho ka furmay
Shirkani oo uu si rasmi ah u furay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee Martigaliyay Madaxda ka qeybgalaysa, ayaa inta uu socdo looga hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin xasaradda ka aloosan Koonfuurta Suudaan, arrimaha diyaargarowga doorashada Soomaaliya iyo arrimaha la xiriira iskaashiga iyo wax wadaqabsiga waddamada IGAD xubnaha ka ah.
Shir Madaxeedkan maanta furmay ayaa waxaaa ka qaybgalaya toddobada waddan ee ururka xubnaha ka ah ee kala ah: Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Djibouti, Ethiopia,Kenya, Koonfuurta Suudaan, Jamhuuriyadda Suudaan, iyo dalka Uganda.
Madaxda Waddamada Xubnaha ka ah Urur Goboleedka IGAD ayaa ah markii ugu horreysay ay Magaalada Muqdisho ku qabtaan shir Madaxeedkooda, tan iyo markiii ururkan la aasaasay 1986-kii.
Shirka waxaa ka maqnaa madaxweynayaasha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo la sheegay in diyaaraddii wadday ay cillad soo wajahday, madaxweynaha Suudaan oo sababo amaankiisa ah uga baaqday shirka iyo madaxweynaha Koonfurta Suudaan oo aan la shaacin sababta uu uga maqnaa shirka.
Shikii IGAD oo Muqdisho lagu soo gabagabeeyay
DHAGEYSO:-Warka Duhur Starfm 11-09-2016